MAXAAD KA TAQAANAAA HABLIHII HORE EE SAXAABADA | Toggaherer's Blog
« MEESHII CIR LAGA FILAAYEY CEERYAAMO KA TIMI…….
SIXID IYO U CAQLI CELIN MUSTAFE OMAR HUSSEIN OO JIBO EHEL QAADAY!! »
MAXAAD KA TAQAANAAA HABLIHII HORE EE SAXAABADA
Marka hore waxaan salaamayaa dhamaan akhristayaasha sharafta leh meel kasta oo ay joogaan
Waxaan door bidey maanta inaan qalinka ula tago arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ay haboon tahay inaynu wax ka ogaano kuna dayanno gaar ahaana ay haboon tahay inay ku daydaan dumarkeenu bal hadaba akhriste ila eeg mawduucan
Walaala yaal waxay diinta Islaamka fadli badan siisay doorka ay gabadha muslimka ahi ku leedahay bulshada Islaamka. Gabadha Muslimada ahi waa tiirka iyo aasaaska bulshada Islaamka. waxay qayb ka yihiin barbaarinta bulshada Islaamka waxayna soo saaraan dad Muslimiin ah oo tayo ku dhexleh bulshada dhexdeeda. Gabdhaha Muslimaatka ahi waxay ku hamiyaan in ay diyaariyaan jiilka mustaqbalka berri iyo hogaamiyayaasha toosan ee dadka ku haga wadada saxda ah waxay kaloo dhisaan qoysas suuban oo ku dhaqma sharciga Alle.
Shaqooyinka ay dumarku qabtaan waa shaqooyin aad u fadli badan, Hadii aynu isku dayno in aynu tirino, waxay noqonayaan kuwo boqolaal buugaag ah laga qoro. Sidaas daraadeed ayaa waxay mudanyihiin in looga mahad celiyo,
sidoo kalena loogu dul qaato shaqooyinka ay qabtaan. Waxaan markhaati u baahnayn in ay yihiin kuwii na soo xanaaneeyay, na soo koriyay, heerka maanta aynu joognona ina soo gaadhsiiyay. Waxaa xaqiiqo ah nin walba oo manta heer gaadhay, hooyo in ay dhashay oo ay soo korisay kuna soo rafaaday. Sidaa awgeed ayaad waxaad arkaysaa Diinteena Islaamka in ay hooyooyinka siisay darajo aad u weyn. Bal aan fiirino tusaalooyin ka mid ah dumarkii ay taariikhdu ka markhaati kacday wanaagooda iyo fadligooda iyo doorkii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda.
Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam) dadkii ugu horeeyay ee garab qabtay waxaa ka mid ahaa Ummul Muâ€™miniin Khadiijah Bintu Khuweylid. Markuu Nabiga (sallalaahu calahyi wasallam) waxyigu ku bilaabmay waxay ahayd qoftii nafteeda u hurtay, wayna nasin jirtay marka guriga u yimaado. Waxayna odhan jirtay ha werwerin matihid nin Alle dayacaye sababtoo ah waxaad xidhiidhisaa qaraabada, waadna caawisaa agoonta.
Sanadkii Khadiija Allaha ka raali noqdee ay dhimatay ayaa waxaa loo bixiyey “Sanadkii Murugada” ama “Caamul Xuzni”. Waxay ahayd dadkii diinta doorka wayn ka qaatay. Waxaa sidoo kale dadkii diinta doorka wayn ka qaatay ka mid ahaa Ummul Muminiin Caaishah(Allaha ka raali noqdee). Caaishah door aan la hilmaami karin ayeey ka qaadatay faafinta diinta Islaamka, iyada oo lugu tilmaamo asxaabta ugu warinta badan xaga axaadiista Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam).
Dumarkii qaybta libaax ka qaatay diinta iyadana waxaa ka mid ahayd Asmaa Bintu Abiibakar (Allaha Ka Raali noqdee)oo loogu yeedhi jirey (Bidaati Al-nidaaqayn) taasoo loola jeedo tii labada suun lahayd ama tii labada maralayda ahayd, sababta loogu magac darayna waxay ahayd, iyadoo u samaysay Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam) iyo aabaheed Abuu-bakar sahay ama saad maalintii ay u haajirayeen magaallada Madiina. Waxay u diyaarisay sibraar, markii ay heli wayday wax ay ku xidho ayaa waxay jeexday suunkeeda (waxa ay dumarku dhexda ku adkeysan jireen) iyadoo laba u kala jeexday, dabadeedna waxay mid ka mid ah labadii maro ee ay jeexday ku xidhay kiishka ama qariiraddii sahayda ku jirtay, tii kalena waxay ku xidhay sibraarta. Nebiga (sallalaahu calayhi wasallam) ayaa markii uu arkay waxa ay Asmaa sameysay ugu duceeyay inuu Ilaah ugu beddelo labo suun Jannada dhexdeeda. Sidaa darteed wixii maalintaas ka danbeeyay waxaa Asmaa lagu yeedhi jiray gabadhii labada suunleyda/ maralayda ahayd. Waxaa iyadana ka mid ahayd gabdhihii taariikhdu baal cad ku qortay Umu Suleym(Allaha ka raali noqdee) oo ahay gabadhii ugu horeysay ee nikaaxeeda Islaamnimo ka dhigatay markuu soo doonay abuu Dalxah oo ay ku xidhay in uu Islaamo, saas ayuuna ku soo Islaamay Abuu Dalxah(Allaha ka raali noqdee). Waxay ahayd mid ugu faanta gabdhaha kale sida lugu mehersaday.
Tusaalooyinkas waa tusaalooyin yar oo ka midka ah kumanaanta tusaale ee gabdhihii wanaagsanaa lugu yaqaanay.
Walaala yaal ugu dambayntii dumarku waxay ka qaateen dacwada qayb libaax, waxaan uga baryaynaa Alle in uu noo barakeeyo iyagana wadada toosan tuso. Anagana kuwii ku sabra kuna dulqaata naga dhigo. Gabdhaha maanta jooga waxaa looga baahanyahay wadadii wanaagsanayd ee walaalahood dumarka ah ay qaateen ayugan in ay ku daydaan.
This entry was posted on June 17, 2009 at 7:14 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.